Mampiasa fanamby YouTube hampitomboana ny isan'ny mpijery sy ny mpanjifanao - YTpals
Mampiasa fanamby YouTube hampitomboana ny isan'ny mpijery sy mpanjifanao
Tsarovy ny fanamby amin'ny siny gilasy sy ny fomba niparitaka tamin'ny media sosialy? Iray amin'ireo ohatra maro amin'ny horonan-tsary mifototra amin'ny fanamby mahomby izay nahatonga onja tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nipoitra ihany koa ny horonan-tsary fanamby ho fomba malaza ho an'ny mpamorona votoaty YouTube hampitombo ny isan'ny mpijery sy ny mpanjifany. Raha vao nanomboka ny fantsona YouTube-nao ianao ary te hahafantatra ny fomba hampiasanao ireo fanamby YouTube hitondrana ny fantsonao amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana, dia vakio.
1. Mifidiana fanamby mifandraika amin'ny fiainanao andavanandro
Ny fanamby fidinao amin'ny famoronana votoaty YouTube dia tsy tokony hiditra amin'ny fanaovana zavatra mitaky anao hiala amin'ny lalanao. Raha tsorina, ny fanamby dia tokony hisy ifandraisany amin'ny fiainanao isan'andro. Ohatra, azonao atao ny manandrana vokatra fikarakarana hoditra mba hampisehoana ny vokany amin'ny mpijery mandritra ny iray volana. Rehefa mifidy fanamby dia ataovy izay hahazoanao antoka fa manao izany ianao nefa tsy manala na inona na inona amin'ny fiainanao.
2. Mamorona fandaharam-potoana fanaovana filma
Raha tsy misy fandaharam-potoana fakàna sary hifikitra, dia kely dia kely ny vintana ho vita tsara ny horonan-tsarinao fanamby ao amin'ny YouTube. Noho izany, alohan'ny hanombohanao maka sary, ataovy azo antoka fa manana fandaharam-potoanan'ny filma ianao. Tokony ho azonao antoka koa fa mifikitra amin'ilay drafitra ianao na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainanao. Mety hanampy izany raha toa ka manana hevitra ihany koa ianao hoe ahoana no hivoahan'ny horonan-tsary alohan'ny hidinanao amin'ny fakàna sary. Ampifandraiso amin'ny fandaharam-potoana stratejika izany, dia ho azonao ny fotoana rehetra hamoronana horonan-tsary mety aminao fomba fijery YouTube maimaim-poana.
3. Sariho ireo fanamby maro isan-karazany mba hahazoana votoaty bebe kokoa
Ny votoatin'ny YouTube mifototra amin'ny fanamby dia matetika fohy sy mahitsy, ary raha namorona fandaharam-potoan'ny horonan-tsary ianao dia tsy haka fotoana be ianao handrakitra izany votoaty izany. Na izany aza, raha te hahita fahombiazana avy amin'ny horonan-tsary mifototra amin'ny fanamby ianao dia mila manome votoaty be dia be ny mpihaino anao. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny maka sary fanamby maro amin'ny fotoana iray. Toy izao ny fomba fiasany – mifidiana fanamby manokana ho an'ny horonan-tsary amin'ny Andro 1 ary mifidiana iray hafa ho an'ny horonan-tsary amin'ny Andro 2. Raha vonona amin'izany ianao dia afaka misafidy fanamby hafa tanteraka amin'ny Andro 3 mihitsy aza.
4. Manaova aingam-panahy avy amin'ireo mpamorona votoaty mitovy aminy
Amin'izao fotoana izao, an-jatony sy an'arivony ireo mpamorona votoaty YouTube izay mamorona votoaty mifototra amin'ny fanamby. Aza matahotra ny maka ravinkazo vitsivitsy amin'ny bokiny tsirairay avy. Ny fijerena votoaty YouTube toy izany dia hanitatra ny faravodilanitrao momba ireo karazana fanamby azonao andramana. Ho afaka hamantatra ireo karazana fanamby tsy tokony andramanao koa ianao, izay hamonjy anao amin'ny fisedrana sy fahadisoana maro mandritra ny fotoana maharitra.
5. Mifandraisa amin'ny fironana
Isan-taona, ny fironana fanamby manokana, izany hoe, ny horonan-tsary momba ireo fanamby ireo, dia mety hiparitaka. Tamin'ny 2022, ny sasany amin'ireo hevitra fanamby nalaza dia ahitana ny fanamby 'Tsy ny tanako', ny fanamby 'Yoga' ary ny fanamby '7 segondra'. Raha very hevitra ianao amin'ny karazana fanamby tokony andramana, aza matahotra mitady vaovao amin'ny Internet. Ny bilaogy sy lahatsoratra tsy tambo isaina sasany dia hanampy anao hahatakatra ny fironana sy ny fomba fanao tsara indrindra horaisina amin'ny famoronana votoaty mamono izay hahatonga anao ho tia YouTube maimaim-poana.
Ankoatra ny fampiasana fanamby YouTube hampitomboana ny isan'ny mpanjifanao sy ny mpijery, dia tokony handinika ny serivisy toy ny YTpals ihany koa ianao. YTpals dia serivisy tonga lafatra ho an'ireo mpamorona votoaty YouTube vaovao hanombohana ny asa famoronana votoaty. Amin'ny alàlan'ny YTpals dia afaka mividy ianao Mpanjifa YouTube, fijerena, tia, ary maro hafa mba hampisy ny fantsona YouTube-nao amin'ny fomba mahafa-po indrindra.
Mampiasa fanamby YouTube hampitomboana ny isan'ny mpijery sy mpanjifanao avy amin'i YTpals Writers, 28 Janoary 2022
Ity no ilainao ho fantatra momba ny fiovam-po YouTube
Ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, ao anatin'izany ny marketing amin'ny YouTube, dia momba ny fandrefesana, ny fianarana ary ny fametrahana ny tongotra tsara indrindra. Arakaraka ny isan'ny olona mihodina amin'ny horonan-tsary an-tserasera (82 isanjaton'ny fifamoivoizana rehetra no mety…
Torolàlanao amin'ny famoronana fandaharam-potoana fandefasana azo itokisana amin'ny YouTube hampitomboana ny mpijery
Misy lahatsoratra sy bilaogy tsy tambo isaina izay manoro hevitra ny mpamorona votoaty YouTube handefa horonan-tsary tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fifikitra amin'ny fandaharam-potoana fandefasana. Na izany aza, tsy dia misy fampahalalana firy momba ny fomba ahafahan'ny mpamorona votoaty mamorona hafatra…
Ireto toro-hevitra ireto dia hanampy anao hanatsara ny fantsona YouTube sy ny atiny
Nanjary milina fikarohana faharoa lehibe indrindra i YouTube - toerana tokana saro-kenatra an'ny orinasany Google - nahitan'ny mpivarotra marika fomba vaovao hijerena ny fizarana horonan-tsary sy ny marketing video. Marika saika isaky ny akany ambanin'ny…